Hargeysa: 5 Xildhibaan oo la xiray & fadhigii Golaha Wakiilada oo la hakiyey – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Hargeysa: 5 Xildhibaan oo la xiray & fadhigii Golaha Wakiilada oo la hakiyey
Mareeg.com: Ciidamada booliska Somaliland ayaa xabsiga 5 ka mid ah xubnaha Golaha Wakiilada Somaliland, iyadoo dhanka kale la baajiyey kulan uu yeelan lahaa Golaha Wakiilada, kaasoo la doonayey in xilka looga qaado gudoomiyaha Golahaas C/raxmaan Cirro.
Shanta Xildhibaan ee la xiray waxaa la geeyey xarrunta dambi baarista CID, iyadoo kalana la xiray xubno ka tirsan Xisbiga Mucaaridka ah ee WADANI ee uu hogaamiyo C/raxmaan Cirro.
Mar sii horreysay oo xalay aheyd ayaa la xiray Xogyihii Golaha Wakiilada maamulkaas, Cabdirisaaq Siciid Ayaanle.
Xarrunta Golaha Wakiilada Somaliland ayaa waxaa xalay la wareegay ciidamada amaanka, waxaana shirka maanta qabsoomi rabay, iyadoo uu shirka ka maqnaa Gudoomiyaha Golahaas C/raxmaan Cirro iyo xildhibaanada Mucaaradka ah.
Baajinta kulanka Golaha Wakiilada ayaa sabab u noqday iyadoo Golaha tageen xubnaha Gudoonka iyo Guddiyada Golaha Guurtida Somaliland oo hogaaminayey, Saleebaan Maxamuud Aadan ayna ka mid ahaayeen Odayaasha ugu miisaanka Culus Guurtida.
Golaha waxaa fadhiyay Mudaneyaasha Xukumadda taabacsan, waxaana qorshihiisu ahaa inuu furo Gudoomiye xigeenka 1-aad ee Wakiilada Baashe Maxamed Faarax, balse guurtida ayaa codsatay kuna guulaysatay inla hakiyo fadhiga. Fadhiga waxaa dib loo dhigay mudo 2 cisho.
Dhanka kalena ilaa 25 mudane oo Mucaaradka ah ayaa Shir Jaraa’id oo ay oo ku qabteen Hotel Emperial ku sheegay in Inqilaab sharci daro ah lagu qabtay Golaha. waxay ku baaqeen in Golaha xorriyaddiisa loo soo celiyo maadaama Ciidamo haystaan.
Guddoomiyaha Golaha wakiiladda Somaliland C/raxmaan Maxamed C/laahi Cirro oo goor dhaweyd shir jaraa’id ku qabtay Hotelka Imperial ayaa war-fidiyeenada u sheegay in laga hor istaagay in uu galo Golaha isla markaana Ilaaladiisa loo hanjabay.
C/raxmaan Cirro ayaa xusay in kulankii uu maantaa yeeshay Golaha Wakiiladu uusan aheyn mid sharci ah.
Dhanka kale, debadbax lagu taageerayey Gudoomiyaha Golaha Wakiilada Somaliland C/raxmaan Ciiro ayaa ka dhacay magaalada Burco ee gobolka Togdheere, waxaana rasaas boolisku dadkaas ku riedeen ku dhintay haweeney, halka labo kale ku dhaawacmeen.
Muranka siyaasadeed ee ka taagan Somaliland ayaa ka dhashay khilaaf soo kala dhexgalay madaxweynaha maamulkaas Axmed Siilaanyo iyo Gudoomiyaha Golaha Wakiilada C/raxmaan Cirro oo isagu aha gudoomiyaha xisbiga Mucaaridka ah ee WADANI.